Ọchịchị Na-arịwanye Egwu nke Nchọgharị ekwentị | Martech Zone
Inwe ebe nrụọrụ weebụ mkpanaka abụghị nhọrọ ma ghara ịbụ ihe nzụlite sitere na ndị mmepe weebụ ụbọchị ndị a. Anyị na-arụ ọrụ na nsụgharị mkpanaka nke saịtị anyị niile na saịtị ndị ahịa maka ọnwa ugbu a, ọ na-akwụ ụgwọ. Ná nkezi, anyị na-ahụ na ihe karịrị 10% nke ndị ọbịa anyị bịara na-eji ekwentị. Gbanye Martech Zone, nke kachasị maka ngwaọrụ mkpanaka, anyị na-ahụ ihe karịrị 20% nke okporo ụzọ anyị na-abịa site na ekwentị mkpanaaka ma ọ bụ mbadamba!
Ekwentị mkpanaka bụ ebe dị n'ịntanetị na-eto ngwa ngwa. Ulo nke ihe kariri ijeri 4 jikọtara ekwentị, onu ogugu na-egosi na iji mkpanaka eme ihe ga-agabiga okporo ụzọ desktọọpụ site na 2014. Nke a pụtara na n'agbanyeghị ụdị azụmahịa ị na-agba, ndị na-ege gị ntị nọ na weebụ mkpanaka, ị kwesịrị ị na-erute ha.
Enwere otu agwa dị na nleta mkpanaka nke dị iche na onye na-ahụkarị websaịtị. Ndị na-enyocha ekwentị na-abata na saịtị gị na-eleta azụmahịa gị ma ọ bụ nyocha nzụta ha ga-azụ. AlchemyViral etinyela ihe omuma a di egwu infographic na mobile njikarịcha.
Tags: ọrịa alchemyviralinfographicekwentị mkpanaaka infographicnjikarịcha ekwentịnjikarịcha ekwentịmkpanaka ọchụchọnyocha ekwentị mkpanaakamkpanaka seoA
Nchịkọta Google na-edebanye aha na Webmasters